Shirweynaha Qaran ee Warbaahinta oo Muqdisho ka furmay-SAWIRRO – Radio Muqdisho
Waxaa barqadii maanta si rasmi ah uga furmay shirweynaha qaran ee horumarinta saxaafadda Soomaaliya, kaas oo ay ka qeyb galayaan wasiirrada warfaafinta dowladda Federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah.
Shirka waxaa furay wasiirka Warfaafinta, Dhaqanka & Dalxiiska Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo sheegay in ujeeddada shirku tahay :
In warbaahinta madaxa bannaan fursad isu hesho si ay u sameystaan siyaasad la xiriirta habka ay bulshada soomaaliyeed farriin sax ah u gaarsiin lahaayeen
Wasiir Maareeye, ayaa sheegay in uu rajo aad u wanaagsan ka qabo in natiijo aad u wanaagsani ay ka soo baxdo shirka oo ah kii ugu horreeyay ee noociisa ah oo ay dowladda iyo dowladaha federaalka xubanaha ka ahi isugu yimaadaan.
“ Natiijada shirka laga sugayaa waa in isbaddel weyn dhaco omarka uu dhammaado, oo saddexda qeybood ay sameystaan qorshe mideysan oo daweynaya baahida warbaahineed bulshada” ayuu yiri Wasiirka Warfaafinta, Dhaqanka & Dalxiiska Maxamed Cabdi Xayir Maareeye.
Wasiirrada warfaafinta ee dowlad-goboleedyada Jubaland,Koofur Galbeed iyo Galmudug oo hadallo ka jeediyay shirka ayaa iyaguna soo dhoweeyay qabsoomidda shirkan , iyagoo wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka uga mahad celiyay qaban qaabadiisa, waxa ayna wasiirradu ballan qaadeen in ay rajeynayaan in ay ka soo baxaan natiijooyin gacan ka geysanaya horumarinta warbaahinta Soomaaliyeed iyo iskaashigeeda.
Afhayeenka madaxtooyada Puntland oo ka wakiil ah wasiirka warfaafinta Puntland ayaa isaguna muujiyay sida Puntland u taageersan tahay shirkan oo uu ku tilmaamay mid macne weyn ku fadhiya.
Shirkan oo socon doona muddo labo maalmood ah,waxaa ka qeyb gelaya wakiillo ka socda qeybaha kala duwan ee warbaahinta madaxa bannnaan iyo hay’adaha warbaahinta taageera eek a howl gala Soomaaliya.